Dr Rakotonirina David: Tonga nitondra fihavanana ho an’ny Mpino FLM aty SAVA
mercredi, 05 septembre 2018 13:48
Ny teny voasoratra ao amin’ny Salamo 133 no nentin’ny Filohan'ny Fiangonana Loterana Malagasy eto Madagasikara, Rakotonirina David, ho an’ireo mpino izay tonga nitsena azy teto amin’ny seranam-piaramanidina Sambava, omaly tolak’andro.
Hoy izy hoe : ’’Tsy hoe mamoha fota-mandry fa lazaina hoe mba mahatsiaro ny lasa hahaizana mitsako raha kenda, ary raha solafaka dia hahay mamindra. Fa tamin’ny Janoary 2017 raha tonga namangy teto izahay sy ny filoha lefitry ny Fiangonana Loterana Malagasy ka tamin’izany no nisian’ny rivo-doza tato anivon’ny mpino samy FLM taty SAVA dia henika fivakivakisana sy ny fisarahana, hotsahivina fa tsy hoe : hodiana tsy hita ny fakam-panahy lehibe saika nampivaky roa ny sinodam-paritany, fa amin’izao andro ahatongavanay 04 Septambra 2018 dia isaorantsika an’Andriamanitra fa niravona izany. Ny azo hamehezana azy dia hoe nikija ny orana tao anatiny andro maro fa nibaliaka izy izao .’’
Tamin’izany fotoana izany dia saika taty amin’ny Faritra SAVA avokoa ny mason’ny mpino FLM roa amby telopolo tapitrisa manerana an’i Afrika, satria na izaho aza tamin’izay raha niatrika ireo mpanao gazety maro be dia sadaikatra ihany, inona no holazaina manoloana iny fivakivakisana izay nisy iny fa ankehitriny dia fifaliana lehibe ao anatin’ny fifamelan-keloka no misy.
Misy ny fampiofanana hiarahan’ny CNPAS foibe sy ny FLM momba ny fiahiana ara-tsosialy izay fifanekem-piaraha-miasa efa ho 20 taona izay. Hisy koa ny fankalazana ny isan-taona eo amin’ny sinaodam-paritany Avaratra Atsinanana, izay atao eto Sambava, ary ny jobilin’ny filohan’ny sinodam-paritany Pastora Razafimahatratra Jean de Dieu mivady ary ny famangiana ireo fileovana maro samihafa aty amin’ny Faritra SAVA.